Posted by: chhepyastra weekly | मार्च 24, 2012
संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यताविपरीत गएपछि आन्दोलनमा जानु परेको हो । जनताको पक्षमा संविधान बन्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनतासहितको सार्वभौम संविधान बन्नुपर्नेमा गडबढी देखिएप छि आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो । संविधान जनताको पक्षमा बन्नेभन्दा पनि रहस्यमूलक ढङ्गले केही राजनीतिक नेताहरूको दिमागीउपज बनाउन थालेपछि आमजनतालाई सचेत बनाउनको निम्ति, आˆनो अधिकारहरू सुनिश्चित गराउनेको निम्ति आवाज बुलन्द गर्नुहोस् भन्नको निम्ति हो ।
पहिला त छापामार युद्धबाट किन आएको भनेर पुष्टि गर्नुपर्यो । कि त्यो बेठीक थियो भनेर आत्मा आलोचना गर्नुपर्यो । छापामार युद्धको औचित्य के थियो भनेर आज इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । यो कसैको इच्छा र चाहनाको छापामार युद्धमा जाने कुरा हुादैन । युद्ध र शान्ति भनेको द्वन्द्वात्मक पक्ष हुन, जनताको हितमा भयो भने शान्तिको पक्षमा सबै छन्, जनताको हितविपरीत भयो भने कोही नेताले अपिल नगरे पनि चक्काजाम, सडक आन्दोलनहरू चलिनै रहेका छन् । त्यसैले ती सबै गलत हुन् बरु पार्टीको आधिकारिक धारणा जनताको संघीय गणतन्त्रको लागि लड्ने सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरुद्धको संविधान बनाउने कुराको राजनीतिक पहलकद्मी मूल नेतृत्वले छोडेको कारणले हामीले त्यसको झण्डा उठाउन बाध्य भएका हौा । त्यसैले पार्टीको आधिकारिक संस्थापन पक्ष पनि हामी भएका छौा ।
पहिले केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि । त्योचाहिा नगर्ने अनि बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्ने, यो सुहाउादो भएन । नेपाली जनयुद्धको ७५ प्रतिशत शक्ति र त्यसको नेतृत्व हाम्रो पक्षमा छ । तर, त्यसको बुझ पचाउादै हिजो जनयुद्धलाई धारे हात लगाउनेहरूको झुण्डलाई बहुमत ठान्नु मूर्ख हो । पार्टी नेतृत्वले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले नेपालको एजेन्डा भनेको राजनीतिक रूपले समस्या समाधान गर्ने दिशातिरभन्दा तुजुकता देखाउने दिशातिर उन्मुख छ । नेतृत्व त्यतातिर जानु खोजिरहेको छ । त्यस्तो नटकीय बहुमतको कुनै अर्थ छैन । यसले नेतृत्वलाई झन् कमजोर बनाउाछ र समस्यालाई झन् चर्काउाछ ।
हो, यही विकृतिका विरुद्ध पनि यो संघर्ष हो । पार्टीभित्रको र समाजमा रहेका विकृतिका विरुद्धको संघर्ष हो, यो हाम्रो । अहिले दैनिकीका समस्याका कारण जनता आहत बनेका छन्, के यही यो शान्ति, यही हो लोकतन्त्र ? हजारौा युवाहरूलाई नयाा नेपालको सपना देखाएर क्रान्तिमा होमियो, तिनीहरू अलपत्र परिरहेका छन् । के यही हो शान्ति ? दुईचार हजार मानिसको बर्दीलाई यता र उता पार्दैमा शान्ति कायम गर्यौ भनेर कसैले घमण्ड गर्छ भने त्योजस्तो बज्रस्वााठ कोही होइन भनेर बुझ्दा कुन्छ । शान्ति जनताको दिलदिमागमा, समाज, शासन पद्धतिमा आउनुपर्यो । दिनदिनै भएका निर्णयहरूलाई हेरौा, कुनै निर्णयले कुनै नेपाली गरिबहरूलाई कुन भूमिहीन किसानलाई, कुन मजदुरलाई सम्बोधन गरेको छ । कुन जागिरेको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । जताततै सुकेको खरानीजस्तो भएको छ । तीनचारजनाको कुर्सीका लागि गरिएको दिमागी कसरतले नेपालको अहिलेको अन्तरविरोध हल हुदैन, यसको निम्ति नया शिराबाट नया राजनीतिक सहमति हुनु जरुरी छ ।
भोका, नाङ्गाहरूको आङ र पेट हेरेर लेखिने संविधानको औचित्य छ । त्यसलाई प्रगतिशील संविधानको रूपमा स्वीकार्न सकिन्छ । तर, कोही अध्यारो कुनाबाट कतैबाट ड्रˆट तयार पारेर जबर्जस्ती हृवीप जारी गरेर, टेबल ठटाउादैमा आएको संविधान नेपाली जनताको आक्रोश र आवेगको शिकार बन्न सक्छ । त्यसकारण यसमा विवेक पुर्याउनुपर्छ । अब नयाा ढङ्गले रजनीतिक बहस गर्नुपर्छ । किनकि हरेक क्षण परिवर्तनशील छन्, यो समयको माग र आवश्यकता जनताको मनोविज्ञान र भावना र राष्ट्रको अवस्थालाई हेरेर निर्णय लिने समय आएको छ । जसले यी कुरा बुझेर अग्रगामी निर्णय लिन सक्छन्, उनीहरू सफल हुन्छन् । जसले यही सम्पूर्ण हो, अरु गलत हो भनेर आफू महान् बन्न खोज्छन्, त्यसको पतन हुन्छ, यो इतिहासले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो । त्यसैले अबको दुई महिना नेपाली जनता सचेत र सतर्क भएर बस्नु आवश्यक छ ।
Posted in क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक, Facebook.com